तपाइ छुट्नु त भएन ? कृषि विकास बैंकमा आवेदन दिने विहीबार अन्तिम दिन, प्लस टुले पनि आवेदन दिन सक्ने, यसरि भर्नुहोस् फाराम « Artha Path
तपाइ छुट्नु त भएन ? कृषि विकास बैंकमा आवेदन दिने विहीबार अन्तिम दिन, प्लस टुले पनि आवेदन दिन सक्ने, यसरि भर्नुहोस् फाराम
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकमा रोजगारीका लागि आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ ।कृषि विकास बैंक लिमीटेडले खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने भन्दै विभिन्न पदका लागि जनशक्ति मागेको छ । कृषि विकास बैंकले अधिकृतसहित ३२६ कर्मचारी माग गरेको हो ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडले खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पदपूर्तिका लागि ठूलो संख्यामा जागिर खुलाएको छ । वरिष्ठ शाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, वरिष्ठ लेखा अधिकृत, वरिष्ठ ईञ्जिनियरलगायत पदमा अधिकृत र विभिन्न पदमा सहायक माग गर्दै बैंकले दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
आज गोरखापत्रमा सूचना निकालेर बैंकले स्थायी दरबन्दीका लागि जागिर खुला गरेको हो । अनलाइनबाट पनि दरखास्त आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ । २९ गतेसम्म दरखास्त दिन सकिने छ ।
कृषि विकास बैंकले चार तहको लेखापालदेखि ९ तहकको वरिष्ठ शाखा प्रमुखसम्मका लागि जागिर माग गरेको हो । बैंकले कुल १५ वटा पदका लागि ३२६ जना कर्मचारी माग गरेको हो । यसमध्ये १८१ जना खुला, ५२ जना महिला, ३७ जना आदिवासीरजनजाति, ३० जना मधेसी, १३ जना दलित, ६ जना अपांगता भएका र ७ जना पिछडिएको क्षेत्रबाट जागिरका लागि आवेदन माग गरेको हो ।
कम्तिमा प्लसटु उत्तीर्ण हुनु पर्नेछ । परीक्षा दस्तुर ४ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म लाग्ने छ । परीक्षा दस्तुर कनेक्ट आइपीएस, इसेवा र खल्ती एपलगायतबाट बुझाउन सकिन्छ । अनलाइनबाट फारम भर्न सकिने छ । बैंकको वेबसाइटमा यो सुविधा उपलब्ध छ । उमेर हद पदअनुसार फरक फरक छ । ४० वर्षसम्मकाले आवेदन दिन सक्ने छन् ।
Apply to hare: https://recruitment.adbl.gov.np/rec/Default.aspx
कृषि विकास बैंक लि.का अनलाईन आवेदकहरुलाई सूचना:
यस बैंकबाट मिति २०७७।१०।०९ गते कर्मचारी दरखास्त आहवान सम्बन्धि प्रकाशित सूचना अनुसारका विभिन्न पदहरुमा आवेदन गर्न दरखास्त फाराम पेश देहाय अनुसार बुझाउने ब्यवस्था रहेकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।
४. छनौट गरेको विज्ञापन नम्बरमा Click गरी बिबरण भर्ने क्रममा खुला तथा समावेशी समूह छनौट गर्ने Check Box हरु देखा पर्नेछन । देखिएको सूचीमध्ये आफूलाई मिल्ने खुला तथा समावेशी जुन समूहमा दरखास्त दिन चाहेको हो सो समूहको सूचीमा रहेको Check Box मा Click गर्नुपर्नेछ । एकपटक दरखास्त Submit भैसकेपछि पूनः सोही बिज्ञापन अन्तर्गतको अन्य समूहमा दरखास्त दिन नसकिने तथा अन्य समूहमा दिनुपरेमा पहिले गरेको सम्पूर्ण प्रकृया खारेज गरी पूनः सबै प्रकृया दोहोऱ्याउनु पर्ने भएको हुंदा यस विषयमा विशेष ध्यान पूऱ्याउनु पर्दछ ।